Ciidanka Somalia oo 50 Jirsaday
Xuska Maalinta Ciidanka
Madaxweyne Shariif ayaa tilmaamay in aan diinta lagu gabban karin, waxaana uu sidaasi ka sheegay munaasabd loo qabtay ciidamada.
Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta labada gole ee DKMG, qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo saraakiishooda .
Waxa halkaasi ciidamada xoogga dalka kula hadlay madaxweynaha DKMG Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isagu qudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa ciidamada u jeediyay, waxana uu ugu horayn madaxweynuhu sheegay in ay fursad wayn u tahay ka soo qayb galka damaashaadka loo samaynayo sanad guuradii 50aad ee ka soo wareegtay aas aaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweyne Sheekh Shariif ayaa qeexay in howlaha abaabulka ciidamada aanay sahlanayn, waxana uu ciidanka ku booriyay in ay aqbalaan xaalada adag ee uu dalku ku sugan yahay isla markaana ay suura galyaan sidii looga bixi lahaa iyagoo ku tashanaya imkaaniyaadka ay haystaan.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa dhinaca kale tilmaamay in qof kasta oo soomaali ah ay masuuliyad ka saaran tahay soo celinta qaranimadii dalka isagoo sidoo kalana kooxaha mucaaradka ee dowlada ka soo horjeeda ku eedeeyay in ay ka soo horjeedaan hanaankii lagu gaari lahaa qaranimo taam ah.
Madaxweyne sheekh shariif ka hor ayaa waxaa munaasabada lagu maamuusayay maalinta ciidanka xoogga dalka ka hadlay taliyahay ciidanka xoogga dalka Gen Maxamed Geelle Kaahiye, oo ka soo qayb galayaasha u sheegay in ay ciidanku u diyaarsanyihiin qaabkii ay dalka uga xorayn lahaayeen kooxaha ka soo hor jeeda siyaasada dowlada, kuwaas oo uu sheegay in ay ka mid yihiin dad ajnabi ah oo ka soo duulay wadamo kale.
Mudaddii ay socotay munaasabada loogu dabbaal dagayay sanad guuradii 50aad ee ka soo wareegtay xiligii dhidibada loo taagay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa waxaa xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya hareeyay madaafiic iyo haabiyayaal lala beegsanayay madasha xafladu ka socotay, in kastoo aanay jirin wax madfiic ah oo ku dhacday goobtaasi iyadoo munaasabaduna ay ku soo gaba gabowday jawi aad u wanaagsan.